Iwo matsva asina mhepo emhepo turbines anomutsiridza matsva | Green Renewables
Iwo matsva asina mhepo mhepo michina
ChiGerman Portillo | | Simba remhepo
Mune yapfuura posvo isu taitaura nezve dambudziko re tsvina inogadzirwa nemhepo turbine mashizha yemapurazi emhepo. Munguva pfupi iri kutevera ivo vanofanirwa kurapwa anodarika mazana mana nemazana mashanu emapeji uye anotora mukana kune izvo zvigadzirwa.
Kuti udzivise kukanganisa kunoitwa neshiri pane shiri, zvinoonekwa, chengetedza pane zvinhu uye dzivisa kugadzira marara, zvirongwa zve turbine dzemhepo dzisina mashizha. Turbine yemhepo ingaite sei kuti ibudise simba remhepo isina mashizha?
1 Vortex Bladeless Chirongwa
2 Mhepo turbine maitiro
3 Mhepo turbine inobatsira
Vortex Bladeless Chirongwa
Iyi purojekiti inoedza kushandura izvo zviripo 3-blade mhepo turbines kune emhepo turbine asina mashizha. Kana paine kusahadzika nezvazvo, aya maturu emhepo anokwanisa kugadzira simba rakafanana neakajairwa, asi nekuchengetedza mumitengo yezvigadzirwa uye kudzivirira zvinokanganiswa nemashizha.
Sezvo isina mashizha, nzira yayo yekugadzira simba pamwe neayo morphology uye dhizaini zvakasiyana zvachose neazvino. Ivo vane basa reiyo Vortex chirongwa vari David Suriol, David Yáñez naRaúl Martín, vanobatana mukambani Deutecno.
Uku kudzikiswa kwemapeji kunopa mukana wekuchengetedza zvinhu, zvekufambisa, zvekuvaka, zvekugadzirisa uye zvinogadzirawo 40% simba rakawanda nemari imwechete iyo inoiswa mune zvakajairwa.
Kubva 2006, apo patent yekutanga yeiyi dhizaini yakamisikidzwa, basa rave kuitwa kugadzirisa aya maturbine emhepo. Kuti uedze kushanda uye kugona mukugadzira magetsi, mugero wemhepo wakavakwa kuyedza uye kutevedzera chokwadi. Yakave yakaratidza prototype yemhepo turbine ingangoita 3 metres kukwirira.
Mhepo turbine maitiro
Chishandiso ichi chinoumbwa neyakaomeswa-simira yakamira yakatwasuka, yakasungirirwa pasi uye yaani zvinhu zviri piezoelectric. Isu tinorangarira kuti piezoelectric zvinhu zvinokwanisa kushandura zvemagetsi kushushikana kuita magetsi, uye magetsi kuita echimakanika vibrations. Quartz muenzaniso wechero piezoelectric crystal. Ipapo, simba remagetsi rinogadzirwa nekuchinja kunoitwa nezvinhu izvi kana zvapinda mutsindo nemhepo. Nenzira inonzwisisika, inoshanda sekunge yaive bhora re baseball rakatarisa pasi, rakatarisa pasi, uye richizungunuka.
Izvo izvo turbine yemhepo inoedza kuwana kutora mukana Von Kármán's vortex mugwagwa mhedzisiro. A von Kármán vortex mugwagwa inzira inodzokorodza yeeddy vortices inokonzereswa nekumira kusakamira kweiyo dura remvura sezvo ichipfuura pamusoro pemitumbi yakanyudzwa. Nemhedzisiro iyi, turbine yemhepo inogona kutenderera kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe kuitira kuti itore mukana weiyo kinetic simba iyo inogadzirwa uye nokudaro kuishandura kuita simba remagetsi.
Mhepo turbine inobatsira
Mamwe mabhenefiti eaya matsva emagetsi turbine ndeaya:
Ivo havapindire nemadhadhi.
Mari yakaderera yezvinhu uye gungano.
Kuderedza kuchengetedza mari.
Inoderedza kukanganisa kwemamiriro ekunze uye mamiriro enzvimbo.
Zvimwe zvinobudirira. Inogadzira yakachipa simba yakachena.
Inoshanda nehukuru hwakawanda hwemhepo inomhanya.
Ivo vanogara zvishoma pasi.
Shiri hadzisi panjodzi kana dzichibhururuka dzakakukomberedza.
Iyo kabhoni tsoka inodzorwa ne40%.
Izvo zvakanaka kune zvinomera zvekumahombekombe nekuda kwekureruka kwavo kwekuisa uye kugadzirisa.
Neshanduro yesimba remhepo iyi, misika ichawedzera kuunzwa kweaya matsva emagetsi anochengetedza mutengo uye nekuchengetedza magetsi akafanana. Kuiswa kwakazara kwekuyedzwa kunozopedzwa mukupera kwegore rino, iyo ichasanganiswa nesimba rezuva kupa dzimba muIndia.
Uye zvakare, chirongwa ichi chave nerutsigiro rweRepsol uye vamwe gumi nevaviri varimi vakazvimiririra vakasarudza kusimudzira simba remhepo uye iyi shanduko yekuvandudza. Mutengo wemusika unenge uri anenge ma5500 euros ye12,5 m yakakwirira turbine yemhepo. Asi chinangwa ndechekuvaka 100-mita Vortex na2018, sezvo iyo yakakwira turbine yemhepo iri, iko kwakawanda kushanda kwazvinoita uye nekuwedzera simba kwarinogadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Simba remhepo » Iwo matsva asina mhepo mhepo michina
Mhepo turbine mashizha ndiwo mhando nyowani yemarara iri kubuda